[Tuesday, September 5th, 17] :: Gobolka Banaadir oo Shaqaaleynaya 1000 Dhallinyaro
Muqdisho (RH) Maamulka Gobalka Banaadir ayaa maanta oo Talaado ah magaalada Muqdisho ku qabtay munaasabad lagu daahurayey mashruuc shaqo loogu abuurayo kun dhallinyaro ah.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed oo VOA u warramay ayaa sheegay in barnaamijka la daahfuray uu ahaa mid 12-kii bishii Ogosto uu ku dhawaaqay ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre oo loo soo bandhigay maamulka gobalka Banaadir.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay mashuurcan in uu muddo kooban socon doono isla markaana lagu shaqaaleen doono illaa 1,000 qof oo dhallinyaro ah.
“Mashuurcan waa mid KMG ah wuxuuna socon doonaa illaa lix bil, waxaana dhaqaalaha bixinaya Midowga Yurub balse baanka adduunka ayaa la soo marinayaa lacagta”ayuu yiri duqa Muqdisho.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in dhallinyarada shaqooyinka loo abuurayo ay da’dooda u dhexeyso 21 illaa 29-jir.
“Dhallinyarada waa kuwa laga soo xulaayo dhammaan degmooyinka gobalka Banaadir oo si simman loogu qeybiyey waxaana degmo kasta ku soo aaday 58 qof marka tirada kunka qof waxaa ka soo haraya 14 qof oo noqon doonta kuwa farsamooyinka ka shaqeeya waana la cadden doona”ayuu yiri duqa Muqdisho.
Dhallinyarada ka qaybqaadanaysa barnaamijkan shaqaalaynta waxaa si siman loo siin doonaa mushahar go’an oo gaaraya $150 qof walba.
Duqa Muqdisho ayaa la weydiiyey qaabka lagu soo xulaayo shaqaalaha cusub ee gobalka Banaadir uu qaadanayo wuxuu sheegay in shaqaalaha lagu soo xuli doono qofka iyo waxa uu yaqaanno ee aaaney jiri doonin waxa la yiraahdo 4.5 oo hadda Soomaaliya ay wax ku qeybsato.
Wajiga Labaad ee shaqo abuurka
Guddoomiyaha gobalka Banaadir ayaa sheegay in isla maanta ay ku dhawaaqeen kun shaqaale cusub oo kale oo la qaadanayo kuwaasoo muddo seddax bil shaqeen doono isla markaana ay ka yar yihiin kuwa la qaatay wajiga koowaad oo shaqadooda ku eg lix bil, wuxuuna sheegay in dhaqaalaha shaqaalaha wajiga labaad ay bixinayaan heyado isku tagay oo lacagta u soo marinaya hey’adda UNDP.